မြန်မာဟင်းလျာအစုံအလင်နဲ့အချိုပွဲတွေကိုအော်ဒါမှာယူနိုင်မယ့် မေမြင့်စားဖွယ်စုံ…… – FoodiesNavi
မအားလပ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ? ? ဟင်းချက်စားဖို့အချိန်မရပေမယ့် ? ? အိမ်ဟင်းကောင်းကောင်းလေးကို ? ? တောင့်တနေတဲ့သူတွေ ၊ အလှူပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် ? ? ? မြန်မာဟင်းကောင်းကောင်းလေးကိုအော်ဒါမှာချင်လို့ ဆိုင်ရွေးချယ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ ? ? အချိုပွဲတွေကိုအော်ဒါမှာချင်တဲ့သူတွေအတွက် ? ? Foodies Navi ကနေသတင်းကောင်းလေးပါးချင်ပါတယ်။ ? ? ဒီဆိုင်လေးကတော့မြန်မာဟင်းမျိုးစုံနဲ့ အချိုပွဲတွေကိုအော်ဒါသီးသန့်မှာနိုင်တဲ့ မေမြင့်စားဖွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
မေမြင့်စားဖွယ်စုံမှာဆိုရင်တော့ ? ? ငါးသလောက်ပေါင်း ၊ ပုဇွန်ထုပ်ဆီပြန် ၊ ဝက်လက်စတူးဟင်း ၊ ဆိတ်ကလီစာဟင်း ၊ ငါးသလောက်ဥအချဉ်ဆီပြန် ၊ ငပ်အစိုကြော် ၊ ပုဇွန်အစပ်ကြော် ၊ ? ? ငါးကျီးငါးပိကောင်ကြော် ၊ ဝက်တုံးစပ်ကြော် ၊ ဝက်ကလီစာဆီပြန် ၊ ဝက်ခေါင်းဝက်အသွေးသုပ် ၊ ချဉ်ပေါင်ဝက်ဆီဖတ်ကြော် ၊ ဝက်ဆီဖတ်ကြော် ၊ ? ? ငါးဖယ်အစိမ်းချက်စတဲ့ မြန်မာဟင်းလျာတွေကိုရရှိနိုင်သလို ? ? မုန့်ဟင်းခါး ၊ ထောပတ်ထမင်း ၊ စတာတွေကိုလည်း မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အချိုပွဲတွေအနေနဲ့ကတော့ ? ? သုံးထပ်ကျောက်ကျော ၊ ဆွမ်းမွှေးကျောက်ကျော ၊ စတော်ဘယ်ရီ,ဘလူးဘယ်ရီ,ကော်ဖီ,အုန်းနို့တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ (၅)ထပ်ကျောက်ကျော ၊ ကြက်ဥကျောက်ကျော ၊ ကော်ဖီအုန်းနို့ကျောက်ကျော ၊ အုန်းစိမ်းပင်ပွားကျောက်ကျော ၊ ဆနွင်းမကင်းစတာတွေကို မှာယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ? ? ? ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ ? ? အသား ၊ ? ? ငါးတွေကိုသာအသုံးပြုထားပြီး ဆီသန့်နဲ့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့် ? ? ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာချက်ပြုတ်စားသောက်သလို စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့စားသုံးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ? ကျောက်ကျောလေးတွေကိုလည်း ဗန်းအကြီးအသေးအလိုက်မှာယူရရှိနိုင်ပြီး အချိုအပေါ့လိုအပ်မှုမရှိဘဲ အချိန်အဆမှန်တဲ့ကျောက်ကျောအရသာကို ? ? ? ထိထိမိမိခံစားရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် ? ☎ 01537422 , 09259266835 ကိုဆက်သွယ်ပြီးမှာယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? ?
Image Source : www.facebook.com/မေမြင့်စားဖွယ်စုံ